လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံမှု အောက်တိုဘာလ(၂)ရက်နေ့စီရင်ချက်ချမည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတာကို အယူခံဝင်ထားတာမှာ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှာ နှစ်ဘက်ရှေ့နေတွေ လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် အမိန့်ချမှတ်ဖို့အတွက် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ကို ရုံးချိန်းပေးလိုက်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတဦးက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ကနေ ၀ိုင်းတော်သားကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီကစပြီး ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှာ နှစ်ဘက်ရှေ့နေတွေ လျှောက်လဲချက် ပေးခဲ့ကြပြီးတော့ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ တရားရုံးက ရုံးချိန်းပေးလိုက်တယ်လို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ တဦးဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အယူခံကို ရှေ့နေကြီးဦးကြည်ဝင်းက လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့ မ၀င်းမမ တို့အတွက် ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့်က လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့သလို တဘက် အစိုးရရှေ့နေတွေကလည်း ပြန်လှန် လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
"အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်က ၃ နာရီခွဲ ၀န်းကျင်ရှိပါပြီး ၃ နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်မှာ တရားရုံးက ဒီအမှုတွေကို အမိန့်ချမှတ်ဖို့ဆိုပြီး အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ၁၀ နာရီကို ရုံးချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်။"
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အဲဒီလို သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ရုံးချိန်းနေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်တတ်ပေမယ့် တရားရုံးရဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုပေါ် မူတည်ပြီး မထွက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အယူခံလွှာလျှောက်လဲချက်ကို ကြားနာခဲ့တဲ့ တရားရုံးပတ်ဝန်းကျင်တ၀ိုက် အရင်ရက်တွေကထက် ထူးထူးခြားခြား လုံခြုံရေး တွေချထားပြီး ကြားနာပွဲလုပ်တဲ့ တိုင်းတရားရုံးထဲကိုလည်း ၀င်ခွင့်မရသလို စစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ခဲ့သူတဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်
"လုံခြုံရေးတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ ပြည့်နေတာပဲ ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူး။ အ၀င်အထွက်တွေတောင် တော်တော်ကျပ်တယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ဒီမှာက သိပ်မရှိဘူးလေ။ ရဲတွေဘာတွေ မရှိဘူး။ အခုဆိုရင် ရဲကားတွေကလည်း ပြည့်နေတာပဲ။ ဟိုဘက် သုံးလေးစီး၊ ဒီဘက် သုံးလေးစီးနဲ့လေ။ ရဲကားချည်းပဲ ၁၅ စီးလောက် ရှိတယ်။ သွားရလာရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ဒီမှာလာကြည့်တဲ့သူတွေလည်း အတော်များတယ်။ စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့နော်၊ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့။ သူတို့ အခု တော်တော်စစ်တယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ဘယ်ရုံးသွားမှာလဲ ဆိုတာမျိုး မစစ်ဘူး။ အခု တော်တော်စစ်တယ်။ တိုင်းရုံးဆိုရင် ၀င်လို့မရဘူး။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အယူခံလွှာ လျှောက်လဲချက်ကို တရားရုံးက ကြားနာတဲ့နေ့ မတိုင်ခင်ညမှာပဲ အကျဉ်းသား ၇,၀၀၀ ကျော်ကို လွှတ်ပေးမယ်လို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ ကြားနာပွဲလုပ်တဲ့ ဒီကနေ့နဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အကျဉ်းသားတွေ စပြီးလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ စုစုပေါင်း အကျဉ်းသားအရေအတွက် ဘယ်လောက်လွှတ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာ တိတိကျကျ မသိရသေးဘဲ လွှတ်ပေးသူတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အယောက် ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင်ပါတယ် လို့တော့ သတင်းရင်းမြစ်အသီးသီးကနေ ပြောပြချက်တွေအရ သိထားရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အပါအ၀င် အကျဉ်းကျသူတွေ လွတ်မြောက်လာတာကို ၀မ်းသာကြိုဆိုပေမယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်လို့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
"အဲန်အယ်လ်ဒီပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သာမန် ရာဇ၀တ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအကျဉ်းသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကျဉ်းထောင်က လွှတ်တာကို ကျနော် ကြိုဆိုပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ အဲန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သော အဖွဲ့ဝင်တွေ လွတ်မြောက်လာတာကို အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်အဖြစ် အများပြည်သူ အကုန်လုံး ကျေကျေနပ်နပ်ဖြစ်၊ အားလုံး ပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် လွတ်မြောက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကျနော် အဲဒီလို မြင်ပါတယ်။"
*မြတ်လေးငုံ* မှပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ၊မျှဝေခံစားနိူင်ကြပါစေ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 19, 2009 Links to this post
၁၃။ဦးတင်မျိုးထွတ်(ခေါ်) ကိုဦး (အင်းစိန်)
၄၅-ကိုအောင်မျိုး (ရွှေဘို) (ရွှေဘိုထောင်)
27. U Tin Myint
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, September 18, 2009 Links to this post
*သံ တိုင်ကြားကN.L.D လူငယ်များရဲ့ ထောင်တွင်းမေ့လို့မရတဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ*ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့
အတူ ကျမ တို့နိူင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေက N.L.D. ပါတီဝင်တွေအပေါ်မှာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပုံတွေ ကျမ လက်လှမ်းမှီသလောက်စုစည်းပြီးတင်ပြပေးသွားပါမယ်။
ကျမ(မြတ်လေးငုံ)ကိုယ်တိုင်(သံတိုင်ကြားကN.L.Dလူငယ်များရဲ့ထောင်တွင်းမေ့လို့မရတဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ)ဆိုတဲ့အစီစဉ်လေးကို နောက်တဦးအနေနဲ့ N.L.D (လူငယ်)တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုဝင်းလှိုင်နဲ့စကားလက်ဆုံမေးမြန်း ထားခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ကိုဝင်းလှိုင် နဲ့ အရင် မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဒီနေ့ညီမက အကိုရဲ့ ထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံလေးတွေ နောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီဝင် တယောက်အနေနဲ့မေးမြန်းမယ်နော်..။ ကိုဝင်းလှိုင် N.L.D ပါတီကို ဘယ်ချိန်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသလဲ?
(၁၉၈၈)ခု.စက်တင်ဘာလ(၂ရ)ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်၊
ပါတီ စတင်တည်ထောင်ချိန်တည်းကနေပြီးပါဝင် ခဲ့တာပါ။
ကိုဝင်းလှိုင် က အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်မှာ ဘာတာဝန်ယူရပါသလဲရှင်?။
ပါတီ စတင်တည်ထောင်ခြင်းမှာတော့ ဗဟိုလူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦး အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုဝင်းလှိုင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲရှင်?။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တပ်ကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)၊ မန္တလေးတိုင်း။နေပြီးရွေးချယ်ခံခဲ့ပါတယ်။
သလဲ?၊ ဘယ်နှစ်နှစ် ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရပါသလဲ?၊နောက်အကို အမှုတွဲတွေကိုပြောပြပေးပါလား?၊
အမိန့်ချခံထားရတာကတော့(၁၀)နှစ်ပါ၊ နှစ်ပြည့်နေခဲ့ ရပါတယ်၊အမှုတွဲတွေကတော့........
(၁)။ဦးကြည်မောင်- ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (ဗဟန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၂)။ဦးချမ်းအေး - ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (မော်လမြိုင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား
(၃)။ဦးစိုးသိမ်း(မောင်ဝံသ) - ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(ဝေါပြည်သူ့လွှတ်တော်
(၄)။ဦးတင်ထွတ်- ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင် ( အိမ်မဲပြည်သူ့လွတ်ကိုယ်စားလှယ်)
(၅)။ဦးကျော်မင်း - ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (ပုသိမ်အနောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
(၉)။ဦးသိန်းတန် -ဗဟိုကော်မတီဝင် (မန္တလေးတိုင်းစည်း)
(၁၂)။ကိုမြင့်စိုး - (ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီ)
ကိုဝင်းလှိုင်ကို စစ်အာဏပိုင်တွေက အိမ်မှာလာဖမ်းတာလား?။
(၂၃.၁၀.၁၉၉၀)မှာ အကိုပါတီရုံးကနေပြီးအိမ်အပြန် နောက်ကနေလိုက်လာပြီး အိမ်ရောက်တာနဲ့ ခန နေပြီးသူတို့ကရောက်လာပြီးလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးခေါ်တာပါ။
ထောင်ဆူပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီး တိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်၊၊ ထောင်အာဏပိုင်တွေကို လက်အုပ်ချည်နှုတ်ဆက်ဖို့
အမိန့်ပေးလို့အာဏဖိဆန်ခဲ့လို့ တိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်၊၊ ထောင်ထဲမှာဘဝမသေဘို့ အတွက်ဖတ်ရှုလေ့လာစရာ
ဟုတ်ပါတယ်၊1999 . January မှာပြန်လွတ်လာပါတယ်။
အကို ခုထိ ထောင်ထဲမှာကျန်နေသေးတဲ့လူတွေကိုဘယ်ပြောချင်သေးလဲအကို?။ နောက် ထောင်ထပ်ပြီး
ကျနေတဲ့နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အကို အနေနဲ့ဘာပြောချင်ပါသေးလဲရှင်?။
ထောင်ဆိုတာ သူရဲကောင်းတို့အတွက်တော့ ရဲတိုက်ပေါ့။ ကြောက်တတ်သူတွေအတွက်တော့ ငရဲပေါ့။ အခု ထောင်ထဲက သူရဲကောင်းတွေကို အလေးပြုပါတယ်။ ဗမာပြည်ကိစ္စက မပြီးသေးတော့ ထောင်ထဲက သူတွေလဲ ဆက်နေကြရအုံးမယ်။ ရင်နာစရာတော့ ကောင်းတယ်။ နာကျင်မှုတွေက ကုစားစရာမရှိဘူး။ နစ်နာမှုတွေက အလျော်အစား မရှိဘူး။ တဖက်သတ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဲဘော်တွေ အားတင်းထားပါလို့ အားပေးပရစေ..။
အကိုရေ ညီမ ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာပြောချင်သေးပါသလဲ?။
ညီမဘလော့လေးက ကောင်းတယ်။ ဒီထက်ဆက်ကြိုးစားပါ။ ကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံတွေ များထားတဲ့အမျိုးသမီး တယောက်အနေနဲ့ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးပါ။
အကိုတို့ စိတ်ကူးရှိပြီး မလုပ်နိူင်သေးတဲ့ အလုပ်ကိုအကိုတို့ ညီမလေးကလုပ် တော့ အားပေးရတာပေါ့။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 17, 2009 Links to this post
*မြန်မာနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အခြေအနေဆိုး*
မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ ကမ္ဘာတ၀န်းက တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့ လွှတ်မပေးသေးတဲ့အပြင် အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ အာဏာပိုင်တွေကနေ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို မတရား ပြုကျင့်တာတွေ၊ အသက် အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်တာတွေက ဆက်ဖြစ်နေဆဲပါ။ ဒီထဲမှာ အခုနောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုကတော့ ဖျာပုံ ထောင်ဘက်က ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘန်ကောက်ကနေ ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ လုပ်နေပါပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ကတိပေး ပြောဆိုခဲ့တာဟာဖြင့် ၂လ ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ ခုချိန်ထိတော့ လွှတ်ပေးမယ့် အရိပ်အယောင်တွေကို မတွေ့ရသေး တဲ့အပြင် အကျဉ်းကျနေသူတွေအဖို့ အခက်အခဲမျိုးစုံ၊ အနိုင့်အထက် ပြုကျင့်ခံရမှုမျိုးစုံ၊ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက် ခံရ မှုမျိုးစုံ၊ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှုမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သတင်းတွေ ပိုပိုပြီး ကြားလာရပါတယ်။
ဒီထဲမှာ အခုနောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကတော့ ဖျာပုံထောင်ဘက်က ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျာပုံထောင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃ ဦးပဲရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ တဦးကတော့ မန္တလေးက ကိုရွှေမောင်ပါ။ သူ့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ပြောပြပါတယ်။
“မနေ့တုန်းက ကျမ တွေ့ပြီးပြန်လာတော့ ကျမယောက်ျားရဲ့ အခြေအနေက တော်တော်ကြီးကို ဆိုးနေတယ်ရှင့်။ တော်တော်ကြီးကို အင်အားချည့်နဲ့ပြီးတော့ သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတာ ကျမရင်ထဲမှာ တော်တော်လည်း ခံစားရတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ လည်း ကိုရွှေမောင်က အစာအိမ်ဖြစ်နေတယ်၊ ၀မ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါ ဖြစ်နေတာပေါ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က တုန်နေတာ ကျမနဲ့ စကားပြောနေတုန်း။ တုန်နေတော့ ကျမ သူ့လက် တွေကို အတင်းဆွဲကြည့်တော့ သူ့ရဲ့လက်သည်းတွေမှာ အမည်းပြောက်တွေ ဖြစ်နေ တယ်။ သူ အတွင်းရောဂါလည်း ဖြစ်နေလောက်တယ်လို့ ကျမ ယူဆတယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရဖို့အတွက် ကျမက ကိုရွှေမောင့်ကို ငွေအလုံအလောက် ပေးထားပါ လျက်နဲ့ ကိုရွှေမောင့်ကို သွေးပေါင်တောင် ချိန်မပေးဘူး။”
ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးစုံ၊ အကျပ်ကိုင်မှုမျိုးစုံ သုံးပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို စိတ်ဓာတ်ရိုက်ချိုး ဖို့ ကြိုးစားတာတွေ၊ သာမန် ရာဇ၀တ် အကျဉ်းသားတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအကြား အဆင်မပြေဖြစ်အောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့အထိဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တာ မျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို အကျဉ်းကျခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေက ပြန်ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း ကိုရွှေမောင်ဟာ အလားတူ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပုံ ရှိပါတယ်။
“၈ လပိုင်းလောက်က ၄ လက္မ သံမှို သူ့အခန်းထဲက တွေ့တယ်တဲ့။ အဲဒါကို ကိုရွှေမောင်က ထောင်ဖောက်မယ့် လူစားပဲ ဆိုပြီးတော့ ကိုရွှေမောင့်ကို ရုံးတင်ပြီး စစ်ဆေးတယ်တဲ့။ စစ်ဆေးတော့ ကိုရွှေမောင်က လုံးဝ လက်မခံဘူး။ ဒါက ကျနော် လည်း မသိဘူးတဲ့၊ ဒီသံမှို ဘယ်လိုရောက်တာလဲ ကျနော် မသိဘူးပေါ့။ အဲဒါ ကိုရွှေမောင်ကို ဇွတ်ဝန်ခံခိုင်းတယ်တဲ့၊ ထောင်ပိုင် က။ သူတို့က အဲဒီလို ကိုရွှေမောင့်ကို စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့၊ ကိုရွှေမောင်ကလည်း လုံးဝ ငြင်းတာပေါ့။ ငြင်းတော့ သူတို့ အထ မမြောက်ဘူး။ အထမြောက်ရင် ကိုရွှေမောင့်ကို ရိုက်သတ်မယ့်သဘောမျိုး။ ထောင်ဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီး ရိုက်သတ်ချင်တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့။ ကိုရွှေမောင့် အသက်အန္တရာယ်အထိ သူတို့ ရန်ရှာလာတယ်။”
ဖျာပုံထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုရွှေမောင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရွှေမောင်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလက သံဃာတော်တွေရဲ့ ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ မန္တလေး မှာ အဖမ်းခံရပြီး မန္တလေးထောင်ကနေ အင်းစိန်ထောင်၊ အဲဒီကနေ ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် ချခံရပြီးတဲ့နောက် ဖျာပုံထောင်ဆီ ရွှေ့ပြောင်းခံထားရတာပါ။
အခုဖြစ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအပေါ် အာဏာပိုင်တွေက ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြုမူဆက်ဆံတာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို နောက်ထပ် သက်သေပြလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဖုံးအုပ်မရဘဲ ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ အခြေစိုက်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဒီ့ထက်ပိုပြီး တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုနေတယ် ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုပါလို့လည်း ကိုတိတ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာကနေ ဒီနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါ၊ လွှတ်ပေးပါဆိုပြီး တောင်းဆိုရုံ၊ ပြောနေရုံနဲ့တော့ ထိရောက် တဲ့ ဖိအား ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့တော့ မထင်ပါဘူး။ အမြန်ဆုံး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာဖို့အတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို ရှာကြံပြီး အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးက ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ရော၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေ အနေနဲ့ရော ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ အရေးတကြီး စဉ်းစားဖို့ လိုနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့ ပြောချင်ပါတယ်။”
AAPP အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင် ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂,၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး အကျဉ်းသား အရေအတွက် လျော့ သွားတယ်မရှိဘဲ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာနေတယ်လို့ AAPP က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း တရားမဝင် လုပ်ငန်းရှင်များ ပုံမှန်ဆပ်ကြေးထက် ပိုပေးနေရခြင်း။
ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူး ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်နေရာကို ရဲမှူးကြီးအောင်နိုင်သူ တာဝန်ယူပြီးနောက် တိုင်းအတွင်း တရားမဝင်လုပ်ငန်းများမှ ဆက်ကြေးကောက်ယူမှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာကြောင်း ပုံမှန် ဆက်ကြေးပေးနေရသူများက ပြောသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ်မှ ဘောလုံးပွဲ လောင်းကစားဒိုင်တဦးက ၎င်းအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကို နဂိုက တလကျပ် (၂) သိန်းပေးနေရရာမှ ယခုရဲမှူးကြီးအသစ်ပြောင်းလာပြီးနောက် ကျပ် (၃) သိန်း တောင်းခံလာကြောင်း ပြောသည်။
ဒဂုံမြို့နယ်၌ အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်ကလဲ “ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကို တလ ပုံမှန် (၆) သိန်းလောက် ပေးရတယ်။ အခု ရဲမှူးကြီးအသစ်ပြောင်းတော့ ဈေးနှုန်းလည်း ပြောင်းမယ် ပြောတယ်။ နောက် အနှိပ်ခန်းနဲ့ ပြည့်တန်ဆာကိစ္စ ရောလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ လောလောဆယ် ပြည့်တန်ဆာကိစ္စတွေ နားထားဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်။ ဒီဆိုင်က ရိုးရိုးအနှိပ်ခန်းပဲဆိုတော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဆက်ဖွင့်ပါဆိုလို့ဖွင့်ထားပါသည်။
ဖရေဇာလမ်းပေါ်တွင် တရားမဝင် ဗီစီဒီ၊ ဒီဗွီဒီ ရောင်းချသူတဦးကလည်း ၎င်းအနေဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာ စုစုပေါင်း (၁၁) ဦးခန့်ကို လစဉ်ဆက်ကြေးပေးရကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တလကို ကျပ် (၂,ဝဝဝ) ကောက်ကြောင်း၊ ရဲမှူးကြီးပြောင်း၍ ဆက်ကြေး တိုးမည်ပြောဆိုသော်လည်း မည်မျှတိုးမည်ဆိုသည်ကို မသိသေးကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့များ၊ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့များ၊ စရဖ ၊များပါအဝင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးသည် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ တရားမဝင်လုပ်ငန်းများမှ ဆက်ကြေးကောက်ခံနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ အနှိပ်ခန်း၊ ပြည့်တန်ဆာရုံ၊ နိုက်ကလပ်၊ ကာရာအိုကေဘား၊ ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများ၊ ဘောလုံးပွဲလောင်းကစားဒိုင်၊ ချဲထီဒိုင်၊ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗွီဒီ ရောင်းချသူများ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းရှင်များ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းပြီး စီးပွားရှာနေသူများထံမှ ပုံမှန်ဆက်ကြေးကောက်ခံလေ့ ရှိကြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ ပေးရသည့် ဆက်ကြေးငွေမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီး ဝင်းနိုင်သည်လည်း မြို့နယ်ရဲမှူးတို့၏ ကတော်များမှတဆင့် လာဘ်ငွေယူသည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ထောင်ဒဏ်(၃) နှစ် ကျခံသွားရခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီးဝင်းနိူင်နေရာကိုရဲမှူးကြီးအောင်နိုင်သူ တာဝန်ဆက်ယူပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ဆက်ကြေးငွေများအပြောင်းအလဲသတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းငွေပေးလျှင်
လိုသလိုလုပ်နိူင်နေကြောင်း ထင်ရှားလျှက်ရှိသည် ကိုတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 16, 2009 Links to this post
ချင်းမိုင်ရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ ဖမ်းဆီးခံရ သူများပြန်လည်လွတ်မြောက်။
စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများ၏ ရုံးတချို့ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က ၀င်ရောက် စစ်ဆေးပြီး အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး နှင့် အမျိုးသား ၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ အမျိုးသားကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း အမျိုးသမီး ၁၀ ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င်နေထိုင်မှုဖြင့် ၁ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အာဏာပိုင်များ က ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ချင်းမိုင်မြို့တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော မြန်မာ အမျိုးသမီး ၁၀ ဦးသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လ၀က) အချုပ်မှ ယနေ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းပါသည်။
ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် အမျိုးသမီး ၁၀ ဦးသည် မြန်မာ့ အမျိုးသမီး သမဂ္ဂ (BWU) အဖွဲ့က စီစဉ်သည့် စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းတွင် တက်ရောက်နေသူများ ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
ထိုနေ့တွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေး ဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ) (HREIB)၊ အမျိုးသား ကျန်းမာ ရေးနှင့် ပညာရေး ကော်မတီ (NHEC)၊ BWU အဖွဲ့ တို့၏ လုပ်ငန်းများ တည်ရှိသည့် နေရာတချို့ကို ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးသည့် ရဲအရာရှိများထံတွင် ရုံးများတည် ရှိရာ မြေပုံ များ၊ အချက် အလက်များ ပါရှိသည် ဟုကြားရပါသည်။
ချင်းမိုင်မြို့အတွင်း ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး အချိန်သည် ထိုင်းရဲနှင့် အာဏာပိုင်များက စီမံချက်အနေဖြင့် တရားမ၀င် နေထိုင်သူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသူများကို အရေးယူဖမ်းဆီးနေသော အချိန်လည်းဖြစ် သည်။
လူ့အခွင့်အရေးနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများ၏ ရုံးတချို့ကို ထိုင်းရဲက တနေ့တည်း ၀င်ရောက် ခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတိုက်ခံများက အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေး ပြောဆိုနေကြပါသည်။
အဖမ်းအဆီး သတင်းကြောင့် ချင်းမိုင်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ၊ သတင်းဌာနများ၏ ရုံးများ ပိတ်ထားကြပြီး တချို့ရုံးများသာပြန်ဖွင့်ထားပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မနိုဘယ်အေး (ခေါ်) မနှင်းမေအောင် မုံရွာထောင်တွင်းတိုက်ပိတ်ခံထားရခြင်း။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မနိုဘယ်အေး (ခေါ်) မနှင်းမေအောင်သည် အသည်းရောဂါ ဝေဒနာခံစားနေရပြီး ယခုတွင် မုံရွာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ တိုက်ပိတ် ခံထားရကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) က ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မနိုဘယ်အေးအား မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တိုက်ပိတ်ခံနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာမသိရှိသေးပါကြောင်း။
မနိုဘယ်အေးသည် အသည်းရောင်အသားဝါ ရောဂါ ဝေဒနာကို အင်းစိန်ထောင်တွင် ရှိစဉ်ကတည်းက ခံစား နေခဲ့ရပြီး ယခု မုံရွာထောင်တွင် သူ၏ရောဂါ ပိုမိုခံစားနေခြင်း ကြောင်းကိုလဲသိရှိခဲ့ရပါသည်။
မနိုဘယ်အေး၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးမြင့်သန်းမှာ သမီးဖြစ်သူ မနိုဘယ်အေး ၏ မည်သည့်သတင်းကိုမှ ယခုထိ မကြားသိ ရသေးပါကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။မနိုဘယ်အေး၏ မိခင်သည် လာမည့် ၁၆ ရက်နေ့တွင် မနိုဘယ်အေး
ကို ထောင်ဝင်စာ သွား တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဇွန်လ အစောပိုင်းက အင်းစိန်ထောင်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅ ဦးသည် “စစ်ခွေးတိုက်” ဟု ခေါ်သည့် အလုံပိတ် တိုက်ခန်းများ အတွင်းတွင် တလကြာ ပိတ်လှောင် ခံထားရပြီး မိသားစုနှင့်လည်း အဆက် အသွယ် မရရှိကြကြောင်း AAPP က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သေပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, September 15, 2009 Links to this post
ပေးပို့ပေးသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ မလေးရှားဌာနခွဲ မှ( ဥက္ကဌ)ကိုကျော်ကျော် အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, September 14, 2009 Links to this post
ဦးဝင်းတင်၏ ဗမာပြည်သူတွေ မလိုအပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ
ဦးဝင်းတင်၏ ဗမာပြည်သူတွေ မလိုအပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အမေရိကန်နိုင်ငံ Washington Post သတင်းစာ တွင်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါး
( ဦးဝင်းတင်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့ကို စတင်တည်ထောင်သူ တဦးလည်းဖြစ် ပါသည်။ သူသည် ၁၉၈၉ မှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ )
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျိမ်းစ်ဝက်ဘ်၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဥ၊် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နှင့် သူ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများသည် ယခုတလော ကမ္ဘာ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံနေရသည်။ ဝက်ဘ် ၏ ဗမာအာဏာပိုင်များနှင့် အဓိပ္ပါယ် ရှိသော ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်မြောက်စေလိုသော ဆန္ဒအား ကျွန်တော်နားလည်ပါသည်။ သို့သော် သူ၏ကြိုးပမ်းမှုက ကျွန်ုပ်တို့၏
ဒီမိုက ရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုကို ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့သည်။ သူက မှားယွင်းသော အကြောင်းကိစ္စအပေါ် အာရုံ စိုက်ခဲ့သည်။ ရေရှည်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာ တရပ်အနေဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူက ကျွန်ုပ်တို့အား ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်စေလိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စစ် အစိုးရက ကျင်းပပေးမည့် ‘ဗန်းပြရွေးကောက်ပွဲ’ သည် ဗမာပြည်သူလူထုတရပ်လုံး လိုလားတောင့်တနေသောလွတ်လပ်မှုကိုလှောင်ပြောင်
ခြင်း မျှသာဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဗမာပြည်သူလူထုသည် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကို တခဲနက် ဆန့်ကျင်ပယ်ချခဲ့ကြပြီး အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပါလီမာန်၌ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်တပ်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်အား အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှစ၍ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများသည် ဗမာပြည်သူများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်ရေး၊ တရားမျှတရေး၊ တသီးပုဂ္ဂလနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ရရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထောင်ချခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
မပြီးဆုံးနိုင်သော ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှု ကာလတလျှောက်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အပြန်အလှန် လေးစားရေးအပေါ် အခြေခံ၍ ဗမာပြည်၏ အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်း နိုင်ရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် စစ်အစိုးရနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအား အစဉ်အမြဲ လမ်းဖွင့်ထားခဲ့ပါသည်။ဤပြဿနာနှစ်မျိုးသည်တခုနှင့်တခုဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ဗမာပြည်သည်တချိန်တခါက အာရှ၏ထမင်းအိုးဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ယနေ့ကာလတွင်စစ်အစိုးရ၏မှားယွင်းသောစီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်မှု အဓွန့်ရှည်ရေးအတွက် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကြောင့် ဗမာပြည်သည် ဆင်းရဲမွဲတေသော နိုင်ငံတခုဖြစ်ခဲ့ရသည်။
စစ်အစိုးရသည် ‘ဗန်းပြရွေးကောက်ပွဲ’ များဖြင့် တရားဝင်မှုအရည်ခြုံရန် ကြိုးစားနေပြီး လာမည့်နှစ်တွင် ‘စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ’ ကို တည်ဆောက်မည်ဟု ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင် လူ တစ်သိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည့် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်ပြီး မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် စစ်အစိုးရသည် ဟာသမြောက်သော အတုအယောင် လုပ်ငန်းစဉ်တရပ်ကို အသုံးချ၍ ၉၃ရာခိုင်နှုန်းကျော်သော မဲဆန္ဒရှင်များကအခြေခံဥပဒေကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ထိုအခြေခံဥပဒေသည်နိုင်ငံခြားအထောက်ပံ့ကိုရရှိခံစားသူများကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရှိခြင်းအစရှိသည့်မသေချာမရေရာသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
အချို့သော နိုင်ငံတကာ လေ့လာသူများက လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲများကို အခွင့်အလမ်းတရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။သို့သော်စစ်အစိုးရ၏အခြေခံဥပဒေအရကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည် အတုအယောင်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်၏ လွတ်လပ်မှုကို မည်သို့မျှ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မှုမရှိမည့် ဖြစ်စဉ်တရပ်တွင် ပါဝင်ရန် မြန်မာပြည်သူလူထု သန်းပေါင်းများစွာ အပင်ပမ်းခံ၊ အဖမ်းအဆီးခံ၊ အနှိပ်စက်ခံ၊ အသက်သေခံ၍ တန်ဖိုးထားခဲ့သော ဒီမိုကရေစီစံနှုံန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်လိမ့်မည်မဟုတ်။
အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်း၊ အခြေခံဥပဒေအား သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းများအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေး၍ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်ပေးခြင်း စသည့် အချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းရန် အားပေးထောက်ခံသည့် ကြေညာချက်တရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ၏ တုန့် ပြန်ချက်သည်ကား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂ဝဝဝ ကျော်အား ဆက်လက်အကျဉ်းချထားခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များကို အလုံးအရင်း စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီကို ထိန်းချုပ်ရန် ဥပဒေအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အနေဖြင့် ဝက်ဘ် ကဲ့သို့သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် တရုတ်ပြည်အား အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းရမည်။တရုတ်ပြည်အားဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်းရန်မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်
ဆိုသောသူ၏စကားများသည်ခေတ်မမီတော့ပဲလက်တွေ့မကျသောအယူအဆများအပေါ်အခြေခံပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ‘ကျမတို့ဟာ ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆို အကြောက်တရားတွေ၊ မလုံခြုံမှုတွေနဲ့ ဆက် ဆံမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျမတို့ဟာ တရုတ်၊ အမေရိက၊ အိန္ဒိယ အစရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆို တန်းတူရည်တူ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ အိမ်နီးချင်းတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် တရုပ်ပြည်နဲ့လဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။’ ဟု ဝက်ဘ် အား အသိပေးပြောကြား၍ သူ၏ အယူအဆကို ပယ်ချခဲ့ပါသည်။
်များကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးပေးရန်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနိုင်ငံများသည်ဗမာပြည်အပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ထားကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအမြတ်တနိုးအလေးထားသောဒီမိုကရေစီတန်ဖိုး
များနှင့်အညီ တရားမျှတသော စုစည်းထောက်ခံမှုကိုပြသသည့်အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။အကယ်၍စစ်အစိုးရသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊တိုင်းရင်းသားကိုယ်စား
လှယ်များဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအပေါ် တိုက်ခိုက်နေမှုများ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ထူထောင်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများ အဆင့်ဆင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဤပိတ်ဆို့ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုများ အချိန်တန်လျင် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလောလောဆယ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သံန္နိဋ္ဌာန်ကိုမည်သူမျှသံသယမရှိကြပါလေကုန်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်ဗမာ့လူ့ဘောင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောပုံရိပ်ဖြစ်ပါ၏။ကျွန်ုပ်တို့လိုလားတောင့်တ၍လှုပ်ရှားရုန်းကန်လျက်ရှိသော လွတ်လပ်မှုများကို ဗမာပြည်သူများထံမှတားမြစ်ရုတ်သိမ်းမည့်လုံးလုံးလျားလျားမှားယွင်းနေသော နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဖိအားပေး တိုက်တွန်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံမည်မဟုတ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစဉ်အမြဲ အသင့်ရှိပါ၏။ သို့သော် ငြားလည်း အသက်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရသော၊ လွတ်လပ်မှုပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးခဲ့ရသော ဒီမိုကရေစီ တန်ဘိုးများ ပြည့်စုံရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း စိတ်အားထက်သန်ဆဲဖြစ်ပါကြောင်း။
အမေရိကန်နိုင်ငံ Washington Post သတင်းစာတွင်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးအား N.L.D(LA)မှ ဦးမိုးဇော်ဦး ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, September 13, 2009 Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံမှု အောက်တု...
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း တရားမဝင် လုပ်ငန်းရှင်များ ပုံ...
ချင်းမိုင်ရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ ဖမ်းဆီးခ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မနိုဘယ်အေး (ခေါ်) မနှင်းမေအောင်...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ အစုလိုက်...